စာဖတ်မှတ်စုများအရ"လူသည် အိပ်ရာမ၀င်ခင်တိုင်း ဒီနေ့အတွက် အသိဥာဏ်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာ ထဲက တစ်ခုခုကို ရလိုက်မှ အဲဒီ တစ်နေ့တာအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဖြတ်သန်းခဲ့သောသူ ဖြစ်သည်"နောက်တစ်ခုကလည်း ဒီလို…
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဆီ သွားရင်းနဲ့ Video ကြည့်လို့ရတဲ့ Site လေးသိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီ Site ထဲမှာ Video တွေတော်တော်များပါတယ်။ ကြိုက်တာကတော့ TV Series တွေကို ပိုကြိုက်တယ်။ TV မှာ ပြနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်းပါတယ်။ အပျင်းပြေ ကြည့်လို့ရတာပေါ့။ အရင်တုန်းကတော့ anzv.tv မှာကြည့်တယ်။ သူက Register လုပ်ပြီး Winamp နဲ့ကြည့်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာက တရုတ်ကားတွေ ကိုရီးယားကားတွေ များတယ်။ အခု Site ကတော့ Register လုပ်စရာလည်း မလိုဘူး။ English Action/Drama တွေတော်တော်လည်းကောင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့ လူတွေပြိုင်ကြည့်တော့ Connection နှေးတဲ့အခါကျရင် သူက Save လုပ်ထားချင်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့ကို မေးတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲတဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သိသလောက် ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် ဥာဏ်ဖြူတွေနဲ့ စမ်းပြီး လုပ်ကြည့်ပါသေးတယ် :P ဒါပေမဲ့ ဘယ့်နှယ့်မှကို မဘယ့်နှယ့်တာပါ။ မရတဲ့ အဆုံး လက်လျော့ထားလိုက်တယ်။ Movie တွေကြည့်ပြီး Download လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေ့ရင်လည်း ပြောပေးသွားပါဦး။ အားလည်းနာတယ် ခင်လည်း ခင်တယ် ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ။ Movie တွေက FlashObject တွေများတယ်။ ကျွန်တော်တော့နည်းမျိုးစုံနဲ့ စမ်းတယ်ဗျာ။ မရဘူး။ Connection ကောင်းရင်တော့ ကြည့်ရတာအဆင်…
Download Here (MeidaFire)
တကယ်ထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ ပညာရှင်တိုင်းဟာ နဂိုဝါသနာအခြေခံပေါ်မှာ ထပ်တလဲလဲ လေ့ကျင့်မှု၊ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သိသင့် တတ်သင့်သမျှကို သိအောင် တတ်အောင် လေ့လာဆည်းပူးမှု ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို စိတ်တိုင်းမကျမချင်း လက်မလွှတ်တတ်မှု ဆိုတဲ့ ပညာသည်ကောင်းရဲ့ အကျင့်တွေ ထပ်ဆင့်ပေါင်းစပ်ပြီးမှသာ တစ်ဖတ်ကပ်းခတ်ကျွမ်းကျင်သူ (Expert) တွေ၊ အသက်မွေးနိုင်လောက်အောင် တတ်မြောက်သူ (Professional) တွေ၊ သူတကာထက် ထူးကဲထက်မြတ်တဲ့ ပါရမီရှင် (Genius) တွေဖြစ်လာကြတာ။
Source : GENIUS - ဖေမြင့်
Banner မှာပါတဲ့ Animated Clock ပုံစံမျိုး Blog မှာထည့်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
1. Download the source file (html)
2. Upload the html (source file) @ any file hosting (I used www.pages.google.com)
3. Get your address/URL of your file
4. In the blogger, go to Template section, Click - Add page elements
6. Insert the following code<iframe allowtransparency='true' border='0' frameborder='no' framespacing='0' height='67' scrolling='no' src='address of your html file' width='69'></iframe>
ကျွန်တော့အတွက်တော့ Banner မှာ ဘာပုံမှ မရှိတဲ့အတွက် အဲဒီမှာပဲ ထည့်ထားလိုက်တာပါ။ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ :)
Credit : animekaos
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘ၀လေး အဖြေရှာမရတုန်း
အလင်းဆုံး လမ်းတွေ ရွေးပေးနိုင်တယ်
အဖေရယ် အမေရယ် အားကိုးရင်းနဲ့
အဖေရယ် အမေရယ် ...
အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲက စာသားလေးတွေပါ
အဖေရယ်အမေရယ် ... တကယ်ပါ ... သူရဲကောင်းများပါပဲ
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရုပ်လေးတွေ (HelloKitty, Pooh, CandyDolls) Website/Blog တွေမှာထည့်ချင်တယ် ဆိုရင် site တစ်ခုကို ညွှန်းပါရစေ။ အဲဒီဆိုဒ်မှာ တော်တော်စုံပါတယ်။ အပေါ်က ပုံလေးတွေက ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေတင်ထားတာပါ။ Forum တွေမှာလည် Avatar အဖြစ်သုံးရင်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ size ကြီးနေရင်တော့ ImageReady မှာသွားချုံ့လို့ရပါသေးတယ်။ အဲဒီနည်းကတော့ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ အဲဒီလို Animation ပုံလေးတွေပါတဲ့ ဆိုဒ်တွေ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ Italy, Germany, France ကဆိုဒ်တွေများတယ်။ တစ်ခြားဆိုဒ်ရဲ့ Link တွေကိုတော့ အဲဒီကပဲ တစ်ဆင့်ဆက်ပြီး ကူးသွားနိုင်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေအပြင် Calendar, Clock, Bakground image တွေအတွက် source တွေကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အချင်းချင်း အင်တာနက်ကနေ e-present :P အဖြစ်ပေးရင်လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
Credit : Lunarea ^_^
မိဘတွေက သူတို့သားသမီးတွေကို စိတ်မဆင်းရဲ စေချင်တဲ့ မေတ္တာ ဂရုဏာစ်ိတ်တွေနဲ့ တစ်ချို့ ကိစ္စတွေကို ဖုံးကွယ်ထားတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ဗျာ သားသမီးတွေဘက်က အဲဒီလို ကိစ္စတွေကို နောက်မှ သိလိုက်ရတော့ ပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ မလုပ်သင့်ဘူး ထင်တယ်ဗျာ။ မိဘနဲ့သားသမီးပဲ အေးအတူ ပူအမျှပေါ့။ သားသမီးတွေ အတွက်ပဲ စဉ်းစားတတ်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ စေတနာကတော့ အဆမတန်ကြီးမားလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဗျာ ...
ဒီကောင်လေးက ဖတ်စရာ ပိုများပါတယ်။
အီးစာအုပ်ဆိုတော့ လက်ညှိုးလေးတော့ ညောင်းလိမ့်မယ်။
PC World အီးစာအုပ် :P Download Here
ကုလားနဲ့ပက်သက်ပြီး အဲ ... ကာလာနဲ့ပက်သက်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ဆိုဒ်လေးတွေကို တွေ့လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်။ အရေးရယ် အကြောင်းရယ်ဆို အသုံးဝင်တာပေါ့။ တစ်ခါတလေမှာ ကာလာကြောင့် အချိန်ကုန်ပြီး အုန်းကိုက်တတ်တယ်။ အဲဒီလို အချိန်တွေမှာ ဒီကောင်လေးတွေက ကျေးဇူးရှင်လေးတွေ။
Adobe Color Labs (Create, Edit and Save Color Themes)
Free online color matching toolbox
With saturation and lightness adjustment.
The first RGB and COLOR search …
မနေ့က F-Secure စမ်းပြီးသုံးချင်တာနဲ့ Torrent Site တစ်ခုကနေ ဆွဲချပြီး လုပ်လိုက်တယ်။ Run လည်း Run ပြီး စက်လည်း Restart လုပ်ရော Screen မှာ ဘာမှ မပေါ်တော့ဘူး။ ထင်တာကတော့ ကွန်ပျူတာကြောင်သွားလို့ပဲလား။ Program တွေအရမ်းများနေလို့ပဲလားမသိ။ တစ်ညလုံး ခဏခဏ Restart ပြန်လုပ်တာလည်း မရ။ ချွေးလည်းပျံနေပြီ Project ကလုပ်နေတုန်းပဲရှိသေးတာကိုး။ ကျောင်းမှာလုပ်ဖို့ရလည်း ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ။ မနက်ကျောင်းသွားခါနီး ပြန်ဖွင့်တော့မှ တောစောင့်နတ် တောင်စောင့်နတ်တွေ မလို့သာပေါ့ ကျေးဇူးရှင် ကွန်ပျူတာ ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်။ နဲနဲတော့ သဘောပေါက်လိုကတယ် Torrent တွေကလာတဲ့ ဟာတွေလည်း စိတ်မချရဘူး။ Comment တွေကို ဖတ်ပြီးမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာကောင်းတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ F-Secure လေးကို စက်တက်တက်ချင်း ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ဒါမှ နဲနဲလေးစက်က သွက်သွားတယ်။ သူ့ခမျာလည်း မနိုင်ဝန်ထမ်းထားရရှာသလိုဖြစ်နေတယ်။ Security အတွက်စမ်းသုံးရင်းနဲ့ ကိုယ့်စက်ပါ ငါးပါးမှောက်တော့မလို့။ အခုတော့ AVG လေးနဲ့ အနည်ထိုင်သွားပြီ။ စက်လည်း သိပ်မလေးတော့ မဆိုးဘူး။ Firewall ကတော့ Sygate ပဲသုံးလိုက်တယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးလို့ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခြားဟာတွေတော့ ထပ်ပြီး မစမ်းသပ်ချင်တော…
Google Video/Map တွေကို ဘလော့တွေ ဆိုဒ်တွေမှာ ထည့်ချင်ရင် အောက်ပါ Link တွေမှာ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေမှာတော့ Company လိပ်စာတွေ၊ ဆိုင်လိပ်စာတွေကို ညွှန်းချင်ရင် Map ထည့်ထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
Resource/More info : http://ajaxsearch.blogspot.com/
Flash file (swf) တွေကို webpage မှာထည့်သွင်းဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့နည်း နှစ်နည်း ရှိပါတယ်။
src="example.swf" width=" " height=" "
data="example.swf" width=" " height=" ">
အပြည့်အစုံကို ဒီဆိုဒ် [ A List Apart ] မှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဆိုဒ်က သင်ခန်းစာတွေအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။ အချိန်တော်တော်ပေးပြီး လေ့လာရဦးမယ်။
အဲဒီတရုတ်လို့ အထင်ခံလာရတာက အခုမှမဟုတ် ငယ်ငယ်လေးကတည်းက။ အသားဖြူတိုင်း တရုတ်ချည်းထင်နေတော့လည်း မခက်ပေဘူးလား။ နောက်ပြီး တရုတ်ပေါတဲ့ မန်းလေးမြို့မှာနေတာဆိုတော့ ပိုဆိုးပြီပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ မန်းလေးမှာကလည်း လမ်းတွေထဲမ၀င်လိုက်နဲ့ အဲ အခုလိုချိန်ဆို ပိုဆိုးပေါ့ နီနီရဲရဲ စာတန်းလေးတွေ ရှိတဲ့ တရုတ်အိမ်တွေတော်တော်များများကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ တရုတ်တွေ နှစ်သစ်ကူးဟာ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေလိုပဲ စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်။ သူ့တို့ အယူအဆကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာမို့လို့လားမသိ ကျွန်တော်တို့န…
[ File Type: PDF, Size: 16.1MB, Life : 90 days ]
Fleck.com allows you to add notes and bullets to webpages and share these annotated pages with friends.
Webpage တစ်ခု ဒါမှ မဟုတ် Website တစ်ခုနဲ့ပက်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက်၊ ယူဆချက် လေးတွေကို Notes သဘောမျိုးနဲ့ ရေးမှတ်ချင်တယ် ဒါမှ မဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေပြီး ဆွေနွေးချင်တယ်ဆိုရင် Fleck လေးက အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Wordpress နဲ့တွဲဖက်ပြီး သုံးနိုင်တဲ့အပြင် FireFox နဲ့ IE အတွက် extension လည်းထည့်သွင်း အသုံးချနိုင်ပါသေးတယ်။
Google မှာ အမ်ပီသရီး MP3 File တွေကို warez direct links များမှတဆင့် အလွယ်တကူ ရှာလို့ ရတဲ့နည်းကို ကိုဖိုးဇင် ဘလော့မှာတွေ့တယ်။ အဲဒီအတိုင်းစမ်းသပ်ကြည့်တာ တော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ဗျာ။ ရှာတဲ့နည်းက လွယ်ပါတယ်(မခက်ဘူးပေါ့) ။
ဒီလိုဗျာ ... Goolge search (web) က Text Box မှာ ဒီစာသားလေး ရိုက်ပေးလိုက်ရုံပဲ
ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် ဒီလိုလေး ထွက်လာလိမ့်မယ်
ထွက်လာတဲ့ Result List တွေကို Click လိုက် ... သီချင်းတွေ DownLoad လုပ်ဖို့ Direct Link တွေထွက်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီကမှတဆင့် ဆွဲသာချကြတော့ဗျာ။ Downlaod Manager ပဲသုံးသုံး Orbit ကိုပဲသုံးသုံး :)
အဲ ... အဆိုတော်အမည်၊ Album အမည်နဲ့ တိတိကျကျ ရှာချင်ရင်တော့ ဒီတိုင်းလေး ရိုက်ထည့်ပေးရင် OK ပြီ။
?intitle:index.of? mp3 song/album/artist/singer
တစ်ခုရှိတာက ဆိုဒ်တွေ တော်တော်များများကတော့ Underground Site တွေများတယ် :) ကိုဖိုးဇင်ရေ ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ :)
Programer လား ? WebDesigner လား ?
လာလာ ဒီကိုလာ ပစ္စည်းကိရိယာ အစုံအလင်ပေးမယ် :P
လူတွေများ တူး(Digg)လိုက်ကြတာ တစ်ထောင်ကျော်နေပြီ
Unlimited Files - 1.5 GB/file
Import address bookPremium Account
Unlimited Files - 2.5 GB/file
Organize/Store files forever
No AdsGigaSize : မြန်ရှာပါတယ် ... မဆိုးဘူး :)
Find this code in HTML view:
ရာဇ၀င် အထုပတ္တိလည်း ရှိရမယ်
မော်ကွန်းလည်း ထိုးလောက်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းရယ်ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ၉၂နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပါ။ ဗိုလ်ချုပ် လူ့လောကကြီးမှာ မရှိတော့ပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စကားတွေ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲ အသဲထဲမှာ အစဉ်အမြဲရှိနေကြတယ်ဆိုတာ ငြင်းလိုမရပါဘူး။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ဆယ့်သုံး ဟာ
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ရာဇ၀င်သမိုင်းကြောင်းတွေ စွမ်းဆောင်ချက်တွေအကြောင်း ပါဝင်တဲ့ ဗွီဒီယိုများကိုလည် YouTube မှာ ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
1. Who is Aung San of Myanmar? 2. Bo Aung San
ခွေးတိုးပေါက် ကြွက်တိုးပေါက်ကလေးများ ပိတ်နေတဲ့ကာလတွေမှာ ဒီကောင်လေးက အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ကြည့်ပြီး ကျော်ကြ၊ ခွကြပေါ့ဗျာ။ တော်ကြာ သံဆူးကြိုးတွေ ဘာတွေနဲ့ ငြိနေမှာ စိုးလို့ပါ :P
ကမ္ဘာပေါ်မှာ Language ပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အခုနောက်ဆုံး တစ်ခုအနေနဲ့ Icon Language ဆိုတာပေါ်လာပါပြီ။ ကွန်ပျူတာသမားတွေ အတွက်ထင်တယ် :) သူ့ရဲ့ပုံစံကတော့ icon လေးတွေမှာ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် ယူဆချက်လေးတွေရှိပြီး icon ရဲ့အောက်ခြေမှာလည်း english လို label ထိုးပြီးသားပါ။ icon လေးတွေလုပ်ပြီးသွားရင် သူငယ်ချင်းဆီကို အီးမေးလ်နဲ့ပို့လို့ ရနိုင်သလို embed လုပ်ပြီး webpage တွေ blog တွေမှာလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mobile Messaging အနေနဲ့လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ တော်တော်လေး သဘောကျစရာတော့ ကောင်းပါတယ်။
Zlango isabeautiful flash based site built by Mantis
ဒီနေ့ နှစ် (၆၀)ပြည့် ပြည်ထောင်စုနေ့ကို မေ့နေတယ်။ ကောင်းရော ဖိုးချမ်းရာ။ ဘလော့တွေလိုက်ဖတ်လိုက်မှပဲ ဒီနေ့ဆိုတာ သတိရတယ်။ မြန်မာ Calendar မရှိတာလည်း ပါတယ်။ ဟိုနေ့ကတော့ ဘုန်းဘုန်းဆီက ယူလာခဲ့ပါတယ်။ အသိတစ်ယောက်ကို ပေးလိုက်တာနဲ့ မရှိတော့ဘူး။ ဒီနေ့လိုနေမျိုး ရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မန်းလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်တွေရဲ့ရှေ့မှာ အလံလေးတွေ ရှိနေဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ မန်လေးကျုံးကို သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် အိမ်တွေရှေ့မှာ လွင့်ထူထားတဲ့ အလံတွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးတာတော့ နှစ်ခြောက်ဆယ် ပြည့်ပြီဖြစ်သော်လည်း ... မလွတ်လပ်သေးတဲ့ လူတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ သြော် ... ထောင်ကျနေတဲ့လူတွေကို ပြောပါတယ်။ မလွတ်လပ်သေးတဲ့ သူ့ကျွန်ဘ၀ကနေ လွတ်လပ်ပြီး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်(သခင်)အောင်ဆန်းရဲ့ ကျေးဇူးတွေကလည်း ကြီးမားလှပါတယ်။ အခုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံကို ဘယ်မှာရှာရမလဲ မသိအောင်ဖြစ်နေသလိုပါပဲ။ သိပ်မတွေ့တော့ပါဘူး။ မန်းလေးမှာဆိုရင်တော့ ဘုရားကြီးက ဆိုင်တွေမှာ အရင်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့ မိသားစုပုံတွေကို ၀ယ်ပြီး အမှတ်တရ သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အခု…
Gabbly Chat ထက်တော့ ဒီကောင်လေးက ပိုသာသွားပြီ။ လေးလည်း မလေးဘူး။ ကြိုက်တဲ့ Messenger(Yahoo, GTalk, MSN) တွေနဲ့လည်း တွဲသုံးလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ GTalk ID နဲ့တွဲပြီး side bar မှာ တင်ထားတယ်။ မိတ်ဆွေများလည်း စမ်းပြီး သုံးကြည့်အုံးပေါ့။ စမ်းသုံးကြည့်သလောက်တော့ GTalk mail message တွေနဲ့လည်းတွဲပြီး သုံးလို့ရတယ်။ အဲဒီတော့ cbox မှာလို message တွေ expire မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်လည်း cbox နဲ့ ဒီကောင်လေးနဲ့ကို အစားထိုးထားတယ် :)
Download Images and Icons
Design by UtomBox
Download Flash swf files from the web browser by using Firefox or Internet Explorer
Internet webpage တွေထဲက Flash game, Flash Animations, Flash Tutorials, Flash Movie Trailers, Flash Advertisements တွေကိုကြိုက်လို့ သိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင် Flash Downloader တွေကို သုံးစရာမလိုသေးပဲ FireFox နှင့် Internet Explore ကိုအသုံးပြုပြီး Dlownload လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ ဆော့ဖ်ဝဲတွေမရှိဘဲ သုံးနေတဲ့လူတွေ အတွက်ဆိုရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရုပ်ပုံတွေကို Download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် RightClick နှိပ်ပြီးသိမ်းလို့ရပေမဲ့ swf file တွေအတွက်ကျတော့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် swf တွေကို အလွယ်ဆုံး Download လုပ်နိုင်မည့်နည်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ သိမ်းချင်သော swf file ရှိတဲ့ webpage ကို အရင်ဆုံးဖွင့်ပေးထားရပါမယ်။
၂။ Tools Menu မှ Page Info ကိုရွေးချယ်ပါ။ (Page ပေါ်တွင် RightClick လုပ်၍လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်)
၃။ Page Info Window မှ Media Tab ကိုရွေးပါ။ (လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ Page မှာပါဝင်တဲ့ image file, css file နှင့် flash (swf) file တွေကို list အနေနဲ့ ပြပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်)
၄။ Media List မှ .swf နှင့် အဆုံးသတ်ပြီး FileType အနေဖြင်…
အခုတလော ဘလော့တွေလိုက်ဖတ်ပြီ3းColumns Template ကို ပြောင်းချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ့ ပြောင်းလိုက်တယ်။ အဓိကကတော့ Side Bar ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ ဟိုဟာ ဒီဟာတွေ လျောက်ထည့်ချင်တာရယ် အပြောင်းအလဲလေးလည်း ထပ်ပြီးဖြစ်သွားအောင်ရယ်ပါ။ အဟောင်းကိုတော့ Backup လုပ်ပြီးသိမ်းထားလိုက်တယ်။ ဒီ Template ကို အင်တာနက်ထဲမှာပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီပုံစံနဲ့ပဲ အရောင်ကွဲတွေ၊ ပုံစံကွဲတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကကတော့ BetaBlogger အတွက်ပါပဲ။3Columns ကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Blogger မှာ Original ပါဝင်ပြီးသား2Col: Template တွေကို3Col: များဖြစ် တော်တော်များများ ပြောင်းလဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Template တွေကို ဒီဆိုဒ် [ Here ] မှာ Download လုပ် လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Credit : www.blogcrowds.com
ကမ္ဘာမှာရော မြန်မာတွင်ပါ ယနေ့လူငယ်အများစုမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ တက္ကသိုလ်များမှ ဘွဲ့ရကြပြီး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့် လမ်းခုလတ်၌ ပညာရေးရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
အချစ်ရေး နှင့် အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများအရက်၊ ဆေးလိပ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းလောင်းကစား နှင့် အပျော်အပါး ကိစ္စများစီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေး ကိစ္စများစိုးစံ(ပြင်ဦးလွင်) ပညာရေး ၀က်ဆိုဒ်မှ ဖတ်မိတာလေးပါ။ ဗိုလ်မှူးမောင်လတ် (အငြိမ်းစား) ဦးစီးတဲ့ အဲဒီ စိုးစံဘော်ဒါဆောင်ကတော့ မေမြို့မှာ မသိသူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ပညာသင်ကြားရေး အပိုင်းရော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အပိုင်းပါ အရမ်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ ဆယ်တန်းတုန်းက ကျူရှင်အတွက် စိုးစံမှာ တက်ချင်ခဲ့ပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ မန်းလေးမှာ ရှိတဲ့ ကျူရှင်ဝိုင်းလေး တစ်ခုမှာပဲ တက်ခဲ့ရပါတယ်။
Those designers who understand CSS at an intermediate to advanced level, but who are not clear on how to effectively develop CSS-enabled designs ataprofessional level, will benefit tremendously from the information in this book. In particular, the following readers will find this book most useful:
Intermediate to experienced HTML users new to CSS. Any professional Web developer who has been exposed to CSS, but needsabetter understanding of how to put the pieces together to create professional-level Web sites.
Professional designers. Professional Web developers learning CSS (without any knowledge of traditional, 1990s-era design practices) and want to understand the best practices for utilizingthe technology.
CSS For Web Design : Download Here (pdf)
[ Truly Madly Deeply by Savage Garden ]
လူတွေမှာ အစွဲကလေးတွေ ရှိတတ်ကြသည်။ အယူအဆစွဲ၊ လူမျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲ စသဖြင့်။ အဲသည်ထဲမှာ အားအကြီးဆုံးက ငါစွဲ။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကတော့ မျှမျှတတ မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်သည် ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ သို့သော် ပြောရာဆိုရာ လုပ်ကိုင်ရာများမှာ သတိထားပြီးကြည့်လျှင် တစ်ဖက်ဖက်က လိုက်မိနေတာတွေ၊ အစွဲကလေးတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်မိတာတွေရှိနေတာ တွေ့ရလိမ့်မည်။ လူတွေမှာရှိတတ်ကြတဲ့ အဲသည်သဘောကို Tom Knight ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်က အခုလိုပြောထားတယ်။
လူတစ်ယောက် အလုပ်တစ်ခုကို အကြာကြီး အချိန်ယူပြီးလုပ်နေရင် သိပ်နှေးကွေးတယ်လို့ပြောတယ်။
ကိစ္စတစ်ခုကို လူတစ်ယောက်မလုပ်ရင် ပျင်းတာ။
ကိစ္စတစ်ခုကို သူ့လုပ်ပါမပြောဘဲနဲ့ လူတစ်ယောက်ကထလုပ်ရင် အဲဒီလူ ဘောင်ကျော်တာတဲ့။
ကိုယ်လုပ်တာဆိုရင်တော့ အလုပ်လာဘ်မြင်တာတဲ့။ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ကိုယ် တီထွင်ကြံဆပြီး လုပ်တတ်တာတဲ့။
လူတစ်ယောက်က သူ့အယူအဆကို အကြောက်အကန်ပြောနေရင် အဲဒါ တစ်စောက်ကန်း တစ်ယူသန်။
အစဉ်အလာ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း တစ်ခုတစ်လေ ချိုးဖောက်မိရင် အဲဒီလူ ယဉ်ကျေးမှု မရှိတာတဲ့
ကိုယ်ဂရုမစိုက်ခဲ့ရင်တော့ ဟာ .... မရဘူး …
ဟိုလျောက်မွှေ ဒီလျောက်မွှေရင်း နဲ့ တွေခဲ့တယ်။ လိုတဲ့အချိ်န်မှာ ပြန်ကြည့်နိုင်အောင်ရယ် မသိသေးတဲ့သူတွေ သုံးနိုင်အောင်ရယ် တင်ထားလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ မသိတာတွေ များလွန်းသေးတော့ မှတ်မှတ်ထားရတယ်။ ဒီလို ကုဒ်မျိုးက ဘယ်လောက်လွယ်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လို ငတုံးတောင် နားလည်တယ်။ ရှင်းနေတာပဲ။
<a href="LINK" onMouseover="document.image.src='FIRST IMAGE'" onMouseout="document.image.src='SECOND IMAGE'">
<IMG src="SECOND IMAG" border="0" name="image"></a>
ပြန်ခါနီး ဧည့်သည်ကို နှုတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကုဒ်လေးနဲ့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်
<body onUnload="alert('YOUR GOODBYE ALERT GOES HERE')">
ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ ဘလော့ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီ မိန်းဘလော့ ရယ် Notes4PC ရယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဲဒီဘလော့ကို လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရင်းက မသိတာလေးတွေ ဗဟုသုတရမည့်စာလေးတွေ မှတ်ထားဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Notes4PC ကိုသိပ်ပြီး Update မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မှတ်စုမှတ်ရာ ရှိလာရင်လည်း ဒီဘလော့မှာပဲ ပေါင်းပြီးမှတ်ထားတော့မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရေးမည့်ပို့စ်တွေကတော့ မန်းလေးအကြောင်းပါလိုက် မပါလိုက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ပို့စ်တွေကတော့ ဟိုအကြောင်းအရာ ရောက်လိုက် ဒီအကြောင်းအရာရောက်လိုက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ဒီနေ့လန်ဒန်မှာ နှင်းကျတာရေးပြီး နောက်ပို့စ်တစ်ခုက Online Tutorial တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ရင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ Notes4PC ကပို့စ်တွေကိုလည်း ဒီဘလော့မှာ ပြန်ပြီး Combine ပြန်လုပ်ပါမယ်။ အကုန်ကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီဘလော့ကို ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရေးမည့် တစ်ချို့ပို့စ်တွေကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ဖူးတဲ့ လူတစ်ချို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပို့စ်လေးတွေကိုတော့ နှစ်ရက်တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် သုံးရက်တစ်ခါ တင်နိုင်အောင်လုပ်သွားပါမယ်။ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ စာတွေကို မျက်စိေ…
Colindale ထမနဲပွဲမှာ တုန်းက ဓာတ်ပုံတွေ ကိုညီပို့ပေးလို့ ဒီနေ့ရလိုက်တယ်။ ကျေးဇူးပါ ကိုညီ။ ဓာတ်ပုံတွေက တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ၀ါးတာတို့ ဘာတို့တောင် မရှိဘူး။ ကျွန်တော်လည်းဓာတ်ပုံထဲကြမှ ကြည့်မိတယ် ဘုန်းကြီးအရောင်ကြီးနဲ့ ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးနားကို ရောက်နေတယ် :D ပုံထဲမှာတော့ လူတွေ ထမနဲကို ဘယ်လောက်ကြိုးစားပမ်းစား ထိုးကြတယ်ဆိုတာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ထမနဲဆိုတာကလည်း စားတော့သာ အရသာရှိတာ ထမနဲဖြစ်လာဖို့ လုပ်ရတဲ့အဆင့်တွေကြတော့ မနည်းဘူး။ နောက်ပြီး တစ်ယောက်တည်းလည်း လုပ်စားလို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်။ ခက်တော့ အခက်သား။ မိသားစုဝင်များတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ အပိုဝင်ငွေ ရချင်ရင် ထမနဲသာထိုးပြီးရောင်းကြလို့တောင် အကြံပေးရမလို ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ မန်းလေးက ဒေါ်ရှိလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲလားတော့မသိဘူး (ရမ်းပြောကြည့်တာ)။ နောက်ပြီး ထိုးရတာလည်း ပညာ တော်တော်ပါတယ်နော်။ အဓိက ကတော့ ထမနဲကို မွှေကတာ တော်တော်ပညာပါတယ်လို့ထင်တယ်။ ရောသမမွှေဆိုတာ ဒီကစတာပဲ။ အမွှေမတတ် အကုန်ငတ်ဆိုသလိုပဲ မွှေတာမကောင်းလို့ကတော့ တူးတူးနဲ့ တွေ့ပြီ။ ထမနဲအထိုးကောင်းမှုက ချက်ချင်းမခံစားရပါဘဲ နောက်နေ့ကျမှ ခံစားရပါတယ်။ လက်မောင်းလေးတွေက သူတို့ကို ဂရုစိုက်ဖို့ ခဏခဏ သတိပေးလာတယ်။
ထမနဲထိုးပြီးတဲ့နောက် ပြန်ရမှာလည်း နောက်ကျနေတယ် ... နောက်ပြီး ရထားတွေကလည်း အဲဒီနေ့မှာ အဆင်မပြေဖြစ်တာနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ ကျိန်းလ…
"ဟင်း" ... ဆိုတဲ့ သက်ပြင်းကြီးကို ဒီနေ့မှ ချနိုင်တော့တယ်။ အရင်နေ့တွေက စာမေးပွဲအတွက် ကမ္ဘာကြီးချာချာလည် ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားတာပါပဲ။ ထူးဆန်းတာ တစ်ခုက 1 ရက်နေ့တုန်းက ဖြေရတဲ့ အချိန်ကိုလည်း ကြည့်အုံး။ ညနေ ၆ နာရီကနေ ၈ နာရီခွဲအထိတဲ့။ အဓိပ္ပယ်မဲ့တာ။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် စာမေးပွဲ ညနေပိုင်းဖြေတာဆိုလို့ ဒီတစ်ခါပဲ ကြုံဖူးတယ်။ စာမေးပွဲလည်း ပြီးရော မှောင်နေပြီ။ အဲဒီနေ့က အခြေအနေကတော့ လေပြေပါပဲ။ နောက်နေ့ ... အဲ ... ဒီနေ့ပေါ့ဗျာ ... ဒီနေ့ဖြေရတဲ့ Logic (Z Language) ကတော့ Unseen တွေကြီး လှိမ့်ပိန့်မေးတယ်။ မေးခွန်းဖတ်ပြီး မျက်နှာတွေကို လိုက်ကြည့်လိုက်တာ ဘီလူးသံပရာသီးကိုက်တဲ့ ရုပ်တွေကြီးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော် အပါအ၀င်ပေါ့ :P အဲဒီတော့ အဲဒ်ီဘာသာရဲ့ အခြေအနေက အသေအကြေပေါ့။ နောက်တစ်ပတ်ဆို 2nd Sem: နှင့်တူ eCommerce Project ကြီးစမယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မောင်ဖိုးချမ်း ယခုတစ်ပတ်မှ စ၍ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အရှုပ်လုပ်တော့မယ် ... အဲ ... အလုပ်ရှုပ်တော့မည် :)
အခုတလော စာမေးပွဲ ရှိနေသူ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများလည်း လေပြေလို အခြေနေလေးတွေပဲ ရှိနိုင်ပါစေဗျာ။ အထူးသဖြင့် ဘော်ဘော်ကြီး ကိုမျိုးအောင်ပေါ့။